IiNkonzo ze-Intanethi - iiNtshumayelo
Ndiyabulela ngokutyelela yethu ikhasi leSermon kwi-intanethi. Kwangathi ungakhuthazwa njengoko uphulaphule umyalezo ovela kwiLizwi likaThixo. IiNtshumayelo zethu ze-Intanethi ziya kunceda bonke abangamaKristu kunye nabo bafuna ukwazi ngakumbi ngeNkosi. Sifake uluhlu lwehlabathi lonxibelelwano lwe-intanethi ukususela kwiqela labashumayeli beendaba ezilungileyo.
Kwimenyu ephezulu ebhalwe apha ngasentla ungachofoza kuyo nayiphi na ikhonkco efumaneka kwiTermonethi ithebhu ukufikelela kwiintetho zethu ze-intanethi.